Mpanamboatra sy mpamatsy mpitatitra entana - Mpitrandraka mpitondra entana any Sina
Kitapo mitondra casserole polyester extensible cationic polyester miaraka amin'ny tontonana fanamainana
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole ity dia entana mahazatra indrindra indrindra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Isan-taona dia amidinay any Etazonia ny maro amin'ireo harona ireo. Manolora sakafo mafana ary tazomy ho mafana na mangatsiaka mandritra ny ora maro ny famoronana casserole anao. Mora soloina madio. Ny kitapo casserole tsirairay dia misy komparty lehibe lehibe eo amin'ny farany ambany sy efi-trano ambony azo avoaka. Mora entina am-paosy sy paosy misy zippered ivelany ny fitazonana fitaovam-piasana na servieta, sns. .. Ny tontonana fanamainana dia fitaovana fanampiny izay mety amin'ny charger de car no hitazona h ...
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole ity dia entana mahazatra indrindra indrindra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Isan-taona dia amidinay any Etazonia ny maro amin'ireo harona ireo. Manolora sakafo mafana ary tazomy ho mafana na mangatsiaka mandritra ny ora maro ny famoronana casserole anao. Mora soloina madio. Ny kitapo casserole tsirairay dia misy komparty lehibe lehibe eo amin'ny farany ambany sy efi-trano ambony azo avoaka. Mora entina am-paosy sy paosy zippered ivelany ahafahana mitazona fitaovana enti-miasa na servisy, sns. Ny fitaovana ivelany dia polyester 300D / 600D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny ...
Na handeha ho any amin'ny lanonam-pisakafoanana manaraka ianao, potluck, lanonana fanakanana ny manodidina, na hetsika fanaovana tailgating, ny mpitondra casserole iray lamaody no fomba tsara hitaterana ireo lovia tianao indrindra amin'ny fotoana manokana. Manolotra safidy isan-karazany amin'ireo mpitatitra casserole izahay. Manolotra endrika, fomba ary loko miloko isan-karazany izahay, izay azo antoka fa hahafaly ny mpandray vahiny na vahiny. Ataovy mafana ny sakafonao mafana sy ny sakafo mangatsiakao amin'ny fizahana ny safidinay mahafinaritra androany! Raha mitady sto bebe kokoa ianao ...
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole ity dia entana mahazatra indrindra indrindra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Isan-taona dia amidinay any Etazonia ny maro amin'ireo harona ireo. Manatera sakafo mafana ary soa aman-tsara miaraka amin'ity kitapo maharitra ity. Ataovy mafana na mangatsiaka mandritra ny ora maro ny famoronana casserole anao. Mora soloina madio. Ny fitaovana ivelany dia polyester 600D / 300D miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny firakofana ny kitapo dia mety ho PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo sy fanadiovana mora amin'ny lamba mando. Matetika izahay dia mampiasa matevina 3-4mm ...
Kitapo mitondra casserole polyester cationic miaraka amina tontonana fanamainana
Kitapo mangatsiaka mitondra casserole ity dia entana mahazatra indrindra indrindra eo amin'ny tsenan'i Etazonia. Isan-taona dia amidinay any Etazonia ny maro amin'ireo harona ireo. Manolora sakafo mafana ary tazomy ho mafana na mangatsiaka mandritra ny ora maro ny famoronana casserole anao. Mora soloina madio. Ny tontonana fanamainana dia fitaovana fanampiny izay mety amin'ny charger de car dia hitazona fotoana mafana kokoa. Ny fitaovana ivelany dia polyester cationic miaraka amin'ny PVC mifono izay mateza be. Ny saron'ny kitapo dia mety PEVA fotsy, PEVA fotsy na foil aluminium izay azo antoka amin'ny fifandraisana amin'ny sakafo ...
Kitapo mitondra casserole polyester lamba misy tahony roa
Na handeha ho any amin'ny lanonam-pisakafoanana manaraka ianao, potluck, lanonana fanakanana ny manodidina, na hetsika fanaovana tailgating, ny mpitondra casserole iray lamaody no fomba tsara hitaterana ireo lovia tianao indrindra amin'ny fotoana manokana. Manolotra safidy isan-karazany amin'ireo mpitatitra casserole izahay. Manolotra endrika, fomba ary loko miloko isan-karazany izahay, izay azo antoka fa hahafaly ny mpandray vahiny na vahiny. Ataovy mafana ny sakafonao mafana sy ny sakafo mangatsiakao amin'ny fizahana ny safidinay mahafinaritra androany! Ity casserole carrier cooler b ...